January 28, 2015 – democracy for burma
On January 28, 2015 January 29, 2015 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
On January 28, 2015 January 28, 2015 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
#UPDATE #breaking #news #burma #student #bowl #campaign #temporarily #stopped
UPDATE: SOME STUDENTS ARE STILL MARCHING …
Naypyidaw, 2015, January 28
Government, Parliament, Students and the National Network for Education Reform (NNER) talk for the first time.10 hours and 30 minutes to 15 hours and 15 minutes Naypyidaw, Ministry of Education, meeting hall, both open and friendly. Bilateral discussion, governments, Representatives of Parliament and democracy education campaign committee Student representatives from the following points are agreed.Joint statement
Once negotiations will start and stop ,a student workshops Education Act agreed to continue to find the answer, and the 88 Generation Students Min Ko Naing,
Facts to Discuss for Education Law:
What are the students requested 11points
1. Education policy and laws, Regulations related laws representatives of the students in the design process, Join representatives of teachers
2. Student, Teacher unions are allowed to move freely formed and the recognition of the existence of unions legal
3. The provisions of the National Education Act vast amount of the National Education Commission universities Coordination Committee Composition
4. Regional and school independent management will consist of self-determination
5. Current practice to prepare for the test systems and university systems
6. Students can independently thinking he can learn to explore new methods to change
7. Races language freedom to add the language and mother tongue-based education
8. All eligible education for all children, including children with disabilities to be
9. Student activities in order to allow the school to students who have been out of school
1. Set national spending by2percent in education
11. Free and compulsory education at the primary level, and adopting improved secondary level
The government officially invited student protestors to hold talks soon after the standoff between students and security forces in Thaungtha valley (Nanmyint valley) on 27 January.
PHOTOCR, YANGON MEDIA-ELEVEN MEDIA
#အရှင်ဦးဝီရသူမှ. #အမျိုးသားဒီမီုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို. #ကြိုဆိုပါကြောင်း နှင့်
အရှင်ဦးဝီရသူမှ. အမျိုးသားဒီမီုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို. ကြိုဆိုပါကြောင်း နှင့် အဖွဲ့ချုပ်အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကြည်ညွန်၏ ဆွေးနွေးမှုသည် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွန်း များ အရလည်းကောင်း လူ့အခွင့်အရေးနှင် တရားမျတမှုရှုထောင့်မှလည်းကောင်း. အမျိုးဘာသာသာသနာရှုထောင့်မှလည်းကောင်း မျတကောင်းမွန် လျော်ကန်သင့်မြတ်စွာ မျတမှုရှိစွာဆွေးနွေးသဖြင့်. ကြိုဆိုပါကြောင်း. ရေးသားထားသည်.
ဝီရသူ – မစိုးရိမ်
အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကြည်ညွန့်(NLD) ပါတီရဲ့ ဆွေးနွေးချက်ပါ။
25.1.2015 ရက်နေ့မှာ ဆွေးနွေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးစတဲ့ အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့် မူလကိုးကွယ်ရာဘာသာကို လွယ်လွယ်ကူကူ စွန့်လွှတ်လိုက် ရတဲ့ အနေအထားမျိုးမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ ဥပဒေမျိုးပိုပြီးတော့ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ သဘောရိုးနဲ့ တင်ပြပါတယ်။(ဦးအောင်ကြည်ညွန့်)
ဦးပဉ္စင်းတို့ တွေ့ကြုံနေရတာလည်း အဲဒီအခက်အခဲပါပဲ။
တစ်ခြားဘာသာတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲ ရောက်လာအောင် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းတဲ့ ဥပဒေမဟုတ်ပါဘူး။
ဦးပဉ္စင်းတို့ မိခင်ဘာသာကို စိတ်မပါဘဲ မစွန့်ချင် စွန့်ချင်နဲ့ စွန့်လွှတ်လိုက်ရတာတွေကို ကာကွယ်ဖို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဂတိတရားကင်းရှင်းပြီး အနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ ဥပဒေတစ်ရပ်ဖြစ်စေဖို့ ကျယ်ပြန့်စွာ ညှိနှိုင်းသုံးသပ်ရေးဆွဲပြီး တော့ အတည်ပြုခြင်းဟာ ပိုပြီးတော့ ကောင်းမယ်လို့ အပြုသဘောနဲ့ အလေးအနက် အကြံပြုဆွေးနွေးသွား တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပြည်သူ့ဆန္ဒကို မျက်ကွယ်ပြုမည့်အစား ပြည်သူ့ဆန္ဒကို လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ညီအောင် ဘယ်လိုညှိပေးမယ်၊ တရားဥပဒေနှင့်ညီအောင် ဘယ်လိုပြုပြင်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးကိုပဲ မျှော်လင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါမှ ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပါတီ
ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်မှာပါ။
အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကြည်ညွန့်နှင့်အတူ NLD ပါတီဝင်အားလုံး ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြု နိုင်ငံရေးသမားကောင်းများဖြစ်ကြပါစေဗျာ…….။
(27.1.2015 DEMOCRACY Today သတင်းစာကို ပူးတွဲတင်းပြလိုက်ပါတယ်။)
“ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆွေးနွေးချက်များ(၁)”
ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်က ကျင်းပသော အမျိုးသားလွှတ်တော်(၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးစောင့် ဥပဒေကြမ်းလေးခုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လေးဦး၏ ဆွေးနွေးချက်များကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
ဒီဥပဒေ (ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ) ပြဋ္ဌာန်းတဲ့နေရာမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ဒီဥပဒေမှာပါရှိတဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ ဘယ်လောက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့ လိုမလဲ သေသေချာချာစဉ်းစား စိစစ်ပြီးတော့ စနစ်တကျလေ့လာသုံးသပ်ပြဋ္ဌာန်းသင့်တယ်လို့ အကြံပြုချင်ပါ တယ်။ နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ လိုက်နာရန်ရှိ တဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစာတမ်းတွေနဲ့ ညီညွတ်မှုရှိဖို့လည်း လိုပါတယ်။ စီးပွားရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူမှုရေး ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ထောင်ရေး စတဲ့အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့် မူလကကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘာသာကို လွယ် လွယ်ကူကူစွန့်လွှတ်လိုက်ရတဲ့ အနေအထားမျိုးမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ ဥပဒေမျိုး ပိုပြီး တော့ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော် သဘောရိုးနဲ့တင်ပြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ ဥပဒေကြာင့်ပဲ ဘာသာကူးပြောင်းဖို့ သွားပြီးတွန်းအားပေးလိုက် သလိုဖြစ်နေမှာကိုလည်း စိုးရိမ်ရပါတယ်။ အဂတိတရား ကင်းရှင်းပြီး အနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ ဥပဒေတစ်ရပ်ဖြစ်စေဖို့ ကျယ်ပြန့်စွာညှိနှိုင်းသုံးသပ်ရေးဆွဲပြီးတော့ အတည်ပြု ခြင်းဟာ ပိုပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ အပြုသဘောနဲ့ အလေးအနက်အကြံပြုဆွေးနွေးရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။